အဝတ်လျှော်စက်များအတွက်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်သုံးအဆင့်မော်တာ stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - တရုတ် Ningbo Nide စက်မှု
အဝတ်လျှော်စက်များအတွက်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်သုံးအဆင့်မော်တာ stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Nide ကွဲပြားခြားနားသောမော်တာအမျိုးအစားများများအတွက်မော်တာ stator အော်တိုထုတ်လုပ်မှုစက်သို့မဟုတ်လိုင်းအပြည့်အဝအထုပ်ထောက်ပံ့နိုင်ပြီး, ၎င်း stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း app ကိုဝေးလံသောစစ်ဆင်ရေးချမှတ်ပါကလုပ်ကိုင်ရန်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
မော်ဒယ်မ .: ND-DZXSJ
ND-DZXSJ အဝတ်လျှော်စက်များအတွက်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်သုံးအဆင့်မော်တာ stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
နိဒါန်း: Nide ကွဲပြားခြားနားသောမော်တာအမျိုးအစားများများအတွက်မော်တာ stator အော်တိုထုတ်လုပ်မှုစက်သို့မဟုတ်လိုင်းအပြည့်အဝအထုပ်ထောက်ပံ့နိုင်ပြီး, ၎င်း stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း app ကိုဝေးလံသောစစ်ဆင်ရေးချမှတ်ပါကလုပ်ကိုင်ရန်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်!
အလိုအလျောက် coil အကွေ့အကောက်များသောနှင့် INSERT စက် / ခြောက်အလုပ်လုပ်ဘူတာသုံးခုအကွေ့အကောက်များသောအကြီးအကဲများနှင့်တဦးတည်းကွိုင် INSERT ဘူတာရုံနှင့်အတူစက်မော်တော်အလိုအလျောက် Stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းလျှော်သုံးအဆင့်
ယခုအသစ်အပြည့်အဝအလိုအလြောကျ stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း app ကိုဝေးလံသောစစ်ဆင်ရေး adops နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစက်, stator ကွိုင်အကွေ့အကောက်များသောနှင့်ကွိုင် INSERT စက်, stator ကွိုင်ဇာစက်, စက်ဖွဲ့စည်း stator ကွိုင်ထည့် stator စက္ကူအဖြစ်အများအပြားစက်တွေ, ပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်လိုအပ်သောအော်ပရေတာလုပ်သားအင်အား၏လျော့ချရေးအတွက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ဝေးကအခြားစက်တွေထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ် lines.And ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နိမ့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်နှင့်မြင့်မားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်အတူ, ဒီ stator ထုတ်ကုန်လိုင်းမော်တာထုတ်လုပ်သူများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
အဆိုပါ stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစီးဆင်းမှုဇယားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျေးဇူးပြုပြီးတွေ့မြင်
1. Flyer လွှဲအချင်း: 240mm;
2. Stack အရှည်: ≤90mm;
4. အကွေ့အကောက်များသောမြန်နှုန်း: ≤2200RPM;
ခုန်၏ 5. အရေအတွက်: 2-4 ကဏ္ဍများ
6.Wire အချင်း: 0.18-1.2mm;
ဝါယာကြိုးအရေအတွက်ကအကွေ့အကောက်များသော 7. စင်ပြိုင်: ≤2
8. Air ကိုဖိအား: 0.5 ~ 0.6MPa;
10. အလေးချိန်: 4000KG;
11. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအပူချိန်: -10 ~ 60 ℃
12. စက်အတိုင်းအတာ (L ကို) (ဝါယာကြိုးစည်အပါအဝင်) 2700 * (W) 2300 * (H) 2200
ဤသည် stator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအလိုအလျောက် stator ကွိုင်အကွေ့အကောက်များသောနှင့်စက်ထည့်တပ်ဆင်ထားသည်,
ဒီမျဉ်းအကွေ့အကောက်များသောအဝတ်လျှော်စက်မော်တာ stator, စသည်တို့စားပွဲပေါ်မှာပန်ကာမော်တာ stator အကွေ့အကောက်များသောများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များအဖြစ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါသည်:
1. , မှိုနှစ်အကွေ့အကောက်များသောအဘို့ပါဝါအရင်းအမြစ်အဖြစ် AC အ servo motor ကို system ကို adapts ခွက်ကို indexing, ဝါယာကြိုးချိတ် & ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စက္ကူနို့တိုက်ကျွေးခြင်း, turntable indexing ပါဝါအရင်းအမြစ်အဖြစ်သုံးအဆင့် variable ကိုအကြိမ်ရေလျော့ပါးမော်တာ adapts;
2. အမည်: သုံးခုအလွှာကွိုင်အကွေ့အကောက်များသောသုံးအကွေ့အကောက်များသောဘူတာနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းပြည့်စုံပါ၏
3. အဆိုပါဗိုင်းလိပ်တံ servo motor ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်, အလှည့်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကို± 1 အလှည့်ဖြစ်၏ ပြုပြင်မြန်နှုန်းကျပန်းမှာသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်, နှင့်မြေတပြင်လုံးစက်မျှသိသာတုန်ခါမှုနှင့်ဆူညံသံရှိပါတယ်;
နှစ်ခုဝါယာကြိုးများ paralle အကွေ့အကောက်များသောအဘို့အဖြစ်နိုင်ပါ့မလား 4. ; အဆိုပါအကွေ့အကောက်များသောသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး, ကြွေဝါယာကြိုးအဘို့အဘယ်သူမျှမပျက်စီးမှု။ wire ကိုလက်စသတ်နေသည်တခါစက်ကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်တော်မူမည်
5. ဝါယာကြိုးချိတ်နှင့် Front-ပြန် left-လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာရွေ့လျား XY ဝင်ရိုးဖြတ်တောက်ဘို့ servo ရွေ့လျားမှုစနစ်, တံတားဝါယာကြိုးများနှင့်ဦးဆောင်ဝါယာကြိုးအရှည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် adapts;
6. မှိုနှစ် servo စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်
7. တစ်ဦးချင်းစီ stator ၏ဖြစ်စဉ်ကို parameter သည်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်နှင့် HMI အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် ,;
8. မြန်နှုန်းကြိမ်နှုန်း converter ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်ကွိုင် INSERT လက်ဆောင်ဘူတာရုံလဲလှယ်မှုအတွက် cam Divide adapts;
9.The တပြင်လုံးကိုစက်စသည်တို့ထောင့်အလှည့်ယန္တရား, left ညာဝါယာကြိုးချိတ်လက်မောင်း Front-ပြန်ယန္တရား, ထည့်ကွိုင်, မှိုရုတ်သိမ်းယန္တရားအကွေ့အကောက်များသော, လက်ကမ်းကြော်ငြာလည်ပတ်ယန္တရားအကွေ့အကောက်များသောပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ် .;
10. ဒါဟာ function ကိုဖော်ထုတ်အမှားရှိပါတယ်;
အဆိုပါသပ်အဖြစ် 11. အသုံးပြုမှု mylar;
12. စက္ကူနို့တိုက်ကျွေးရေး, ကြားကာလ slot ကသပ် INSERT များအတွက် servo motor ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည် adapts ။ တုံးအအရှည်နှင့်အရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်;
tool များ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများ 13. ပစ္စည်း, Tools သံမဏိ;
ယန္တရားကိုနှိပ် 14.The ဝါယာကြိုးတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည်, ထိုအကွေ့အကောက်များသောမှိုသို့တိုက်ရိုက်နှင့်တိကျစွာကွိုင်လေနိုင်ပါတယ်;
ယန္တရားတွန်းအားပေးကွိုင်, ယန္တရားထည့်ကွိုင် Pre-deceleration function ကိုရှိပါတယ်ယန္တရား, သပ်ချမှတ်ခြင်းယန္တရား, အကွေ့အကောက်များသော 15.The;
16.The အမြန်နှုန်း, မှိုနှစ်မြန်နှုန်း, အရပ်တွန်းအားပေး-Up နှင့်အချိန်ကိုရပ်တန့်ထည့်သည့် HMI အပေါ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်ကွိုင်မြန်နှုန်းရွေ့လျားဝါယာကြိုးချိတ်လက်မောင်း, သပ်ချမှတ်ခြင်းအမြန်နှုန်း, turn-စားပွဲပေါ်မှာ indexing အမြန်နှုန်း, အကွေ့အကောက်များသော;
အဆိုပါသပ်ဘို့ 17. အဘယ်သူမျှမပျက်စီးမှုကွိုင် INSERT ပြီးနောက်ဝါယာကြိုး,
တစ်ခုတည်း stator ကွိုင်inserting≤32sec / PC အတွက် 18 Cycle အချိန်
ပိုပြီး deatils ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနိုင်ပါသည်!
ယခင်: အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် Stator ထုတ်လုပ်မှုစည်းဝေးပွဲကိုစက်
နောက်တစ်ခု: stator insulator တွင်လည်းစက္ကူဖိုင်တွဲများနှင့် Inserter ကိရိယာများ
အလယ်အလတ်က F စက် orming
အပြည့်အဝအော်တို BLDC Brushless မော်တာ stator producti ...